Indlela yokudala isicwangciso esiphezulu se-backlink kwiwebhusayithi yakho?
Eli nqaku lenzelwe ukufumana impendulo kwenye yeyona mibuzo ehlala ibuzwa rhoqo "Indlela yokubuyisela i-backlink kwiwebhusayithi?" Izicwangciso ezininzi zokwakha izixhobo zivumela ukuba sidibanise nezinye iisayithi ezihlobene niche. Nangona kunjalo, akuzona zonke ezo zibizwa ngokuba yi-organic. Enyanisweni, akukho sikhokelo esisodwa sokugqibela sokwakha esixhomekeke kuphela kwiindlela eziphilayo. Kwezinye iiwebhusayithi, esinye isicwangciso sinokunika iziphumo ezintle ze-SEO kwaye unikezele ngamathuba athile okuzakhela unxibelelwano. Indlela efanayo kwabanye ingabonakali nento echanekileyo okanye kwindleko yoshishino.
Njengoko ixesha liqhubeka, izicwangciso zokwakha izixhumanisi ezahlukeneyo zivame ukugqithisa njengento engaphezulu okanye ngaphantsi. Ezinye iindlela zokuvelisa izixhobo zingasebenzela kakuhle ixesha elithile, kwaye ke umsebenzisi wabantu baqala ukutshintsha kwaye ngoko isicwangciso sakho kufuneka sitshintshe.
Indlela yokucwangcisa isicwangciso sakho sokwakha isixhumanisi?
Ukwakha isicwangciso sakho sokwakha isixhumanisi, kufuneka ukhangele ngeqhinga elihlukile ngokukodwa kwi-niche yakho yemakethe. Hlola bonke ukuba baqonde ukuba ngubani osebenza kakuhle kwi-intanethi yezoshishino. Hamba kunye nokusebenza kwaye uzame iingcamango ezintsha. Kuhlala kukutya ukuba ube neendlela ezininzi zokwakha izixhumanisi zokunxibelelana njengoko kukunika ithuba lokudala iphrofayli yenkcazelo yangaphandle. Njengoko imarike yedijithali yindawo eguqukayo rhoqo, kuya kuba nokuqiqa ukuqhubeka nokuzama iindlela ezintsha.
Kutheni kuyingozi ukusebenzisa iinkqubo zokwakha iinqununu?
Namhla, kukho iitoni zenkqubo yokwakha izixhumanisi ezenzelwe ukupompa imali yakho. Bathembisa i-webmasters ukwenza amawaka ezinkulungwane ze-backlink ezivela kumasayithi aphezulu asemthethweni ngexesha elifutshane. Abantu abanamava kwiprojekti yokucwangcisa injini yesazi bayazi ukuba akunakwenzeka kwaye kuzandile ukuba kulungile. Enyanisweni, inkqubo yokwakha isixhumanisi ithatha iinyanga kwaye idinga umsebenzi omningi. Nokuba isicwangciso sakhiwo soqhagamshelwano lwe-spammy sisebenza, okwangoku, iGoogle iya kuyifumana kwaye ihlasele, okanye yimbi ngakumbi indawo yakho kwisigwebo esinamandla. Yingakho kufuneka uphephe izicwangciso ezinjalo kwaye ugxininise kwiinkqubo zokwakha izixhumanisi zendalo.
I-backlinks ye-Organic iFANELE!
I-backlink yemvelo yinkxalabo oyifumana ngaphandle kokucela umntu ukuba abeke umnxibelelwano kwisiza sakho. Njengomthetho, ufumana unxibelelwano olunjalo ngaphandle kolwazi lwakho. Isebenza lula kakhulu. Ngokomzekelo, ufumana into oyithandayo kwaye udibanisa nayo kwiwebhusayithi yakho. Kufuneka uqaphele ukuba i-Google ithande izixhumanisi zendalo kunye nemivuzo yewebhusayithi eyenza ukuba ibe nezinga eliphezulu kwiphepha lekhasi lokukhangela. Yingakho olu hlobo lwezonxibelelwano lukhuselekileyo. Unokuqiniseka ukuba abayi kuze bahlaziywe yiGoogle.
Ukuqhagamshelanisa isakhiwo esisebenza ngokwaso
Wonke umnini wewebhusayithi ubheka isicwangciso sokwakha isiqhagamshelo esinokusebenza ngaphandle kwengqwalasela yakhe. Ukuba ungathanda ukufumana isicwangciso esingasidingi umsebenzi wakho rhoqo phantsi kokufumana unxibelelwano ngalunye, iblologi yithuba elihle kuwe. Yonke into oyifunayo kukudala ibhlogi ngokusekelwe kwisihloko sakho soshishino kwaye uqhubeke ngokuthumela amaqaku amanqaku aya kuba luncedo kubasebenzisi. Ukuba unako ukubonelela abasebenzisi ngomxholo onobuncedo, baya kudibanisa namanqaku akho kunye nokudala izixhumanisi ezingaphezulu kwezinto eziphilayo kwiziko lakho Source .